Misy fahasamihafana eo amin'ireo fitoriana sy fitarainana
Misy fahasamihafana eo amin’ireo fitoriana sy fitarainana
Inona ny fitarainana ary inona ny fitarainana: izay mety hanaiky ny toy izany antontan-taratasy sy ny teny ao anatin’ny izay tsy afaka manao zavatra. Ny fitarainana sy ny fitoriana dia tsy toy izany. Amin’ny lalàna, raha ny marina, no mampiavaka ny roa andrim-panjakana. Ny safidy ny iray na ny hafa, dia mitondra miaraka aminy isan-karazany vokany izay tokony ho fantatra mba hiarovana ny tenanao ny tsara kokoa. Kanefa hitantsika tsara kokoa inona no maha samy hafa ny fitarainana sy ny fitoriana. Ny fitarainana mety ho atolotra ny olona ny zava-misy izay ianao no niharam-boina ary koa ho an’ny ny zava-misy izay dia nisy ihany ireo vavolombelona. Raha ny mpanoratra ny fitarainana dia tsy miankina sy ny olom-pirenena, dia manana ny marina (tsy ny adidy) mba hitatitra ny zava-misy ny heloka bevava, afa-tsy amin’ny toe-javatra miavaka. Saina: ny fitakiana ny fitoriana ho an’ny an-tanàna mba hirotsaka an-tsehatra rehefa ny olona telo, fara fahakeliny, ny toe-javatra: Ny fitarainana mety ho nanaiky, rehefa afaka manimba ny zava-nitranga, na avy amin ny fahalalana ny zava-misy ny heloka, tsy misy fetra ny fotoana. Ny Fitsarana ny Polisy dia manatanteraka fanadihadiana mba hahafantarana ny zava-misy niampanga. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny olona izay nametraka ny fitoriana, dia mety ho antsoina ho vavolombelona eo anatrehan’ny Fitsarana. Raha toa ka ny olona izay nametraka ny fitoriana-dia ihany koa ny niharam-boina ny heloka, dia mety hanapa-kevitra ny hiditra an-tsehatra amin’ny maha-pirenena mpitory tao amin’ny fitsarana heloka bevava ho fangatahana ny famerenana amin’ny laoniny na ny fanonerana ny fahavoazana. Ny fitoriana dia ny asa izay nanafintohina ny olona manokana (na ny mpampanoa lalàna manokana), dia maneho ny fahavononan’ny ny Fahefana ara-Pitsarana fa ny mpanafika dia mety ho heloka bevava ny fanenjehana sy ataovy azo antoka ny fitondran-tena. Tsy toy ny fitarainana, noho izany, ny alalan ny fitoriana tsy mampita ny vaovao momba ny heloka bevava, fa mazava manontany fa hanohy hanohitra ny mpanao ratsy. Ny fitoriana atao ho nametraka fitarainana ihany ny olona tafintohina noho ny heloka bevava (na ny na ny mpandova ara-dalàna raha ny fahafatesana na ny kilema). Ny olona tafintohina noho ny heloka dia tsy ireo ihany no nizaka ny heloka bevava ihany koa fa ny olona tompon-pananana izay no ratraina. Raha ny marina, ny famelezana olona iray dia ho navahana fa ny isa hafa: ny niharam-boina ny heloka bevava. Amin’ny farany, na izany aza, dia iray ihany, izay efa niaritra ny simba (ohatra: toekarena very), fa tsy ny mpihazona ny ara-dalàna-pananana ny alalan ireo fitsipika. Andeha isika haka ohatra. Tsy ara-dalàna ny fidirana amin’ny rafitra solosaina. Mpiasa amina orinasa iray nangalatra ny tenimiafina sy ny hazo eo amin’ny rafitra solosaina ny orinasa sy hanesorana vaovao saro-pady fa mifandray ny gazety ao an-toerana, izay mifandraika amin’ny antontan-taratasy voasonia avy amin’ny mpanatanteraka ny mpitantana ny orinasa. Amin’ity tranga ity, ny olona naratra noho ny fandikàn-dalàna, dia aoka izay ny orinasa, ao amin’ny olona ny ara-dalàna solontena, ary ny mpitantana, raha efa nijaly pecuniary very na tsy pecuniary, izay homarinana avy amin’ny tsy ara-dalàna ny fidirana, dia ho simba ny fandikàn-dalàna. Ny niharam-boina, tsy toy ny niharam-boina, tsy manana zo ny andraikitra, nefa, na dia izany aza anefa, azonao atao ny mametraka fitarainana noho ny heloka mba hotsaraina ex officio. Toy ny fitsipika, io fahasamihafana io dia tsy manana lanja izany satria, amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ny olona tezitra mifanandrify amin’ny olona simba ny heloka bevava. Ankoatra ny fepetra takiana ho an’ny ny fitarainana, ny fitarainana dia tsy maintsy ahitana ny fanehoana ny dia ny mpanao ratsy dia iharan’ny fanadihadiana momba ny heloka bevava. Raha ny marina, ny fitoriana dia ny toe-javatra admissibility ho an’ny rehetra ireo heloka izay azo henjehina afa-tsy raha toa izany no nametraka ny fitoriana. Noho izany, maro ny mahazatra ny heloka bevava (toy ny unintentional naratra, na dia lehibe, araka ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana), ao ny tsy fisian’ny ny fitoriana, dia tsy ho tafatoetra. Andeha isika haka ohatra. Efa niharan’ny lozam-piarakodia sy ny mijaly ny ratra izay miteraka ny aretina ny telo-polo andro. Amin’ity tranga ity, raha te-meloka mba hotsaraina, dia tsy maintsy ho voatery hametraka fitoriana. Raha hampiditra tsotra fitarainana fa ny heloka bevava fitsarana dia nitsahatra noho ny tsy fisian’ny fomba ofisialy ny fitarainana. Samy hafa ny raharaha ny fanaovana heloka bevava prosecutable ex officio, izany hoe, ireo izay tsy mila ny fitoriana, fa fotsiny ny fitarainana. Ny fitsarana heloka bevava ao amin’ity tranga ity dia manaraka ny mazava ho azy fa, na dia eo aza ny tsy fisian’ny fitoriana. Ny fitoriana dia tsy maintsy nametraka fitoriana, amin’ny ankapobeny ny fandikan-dalàna, ao ny tsy extendible fe-potoana telo volana manomboka amin’ny fotoana tena fahalalana ny zava-misy. Andeha isika haka ohatra. Ny andro any amin’ny janoary taona, dia nividy rindrambaiko ho an’ny orinasa, amin’ny fametrahana voalahatra ho amin’ny amby telo-polo voalohany tamin’ny volana janoary, izay hatao ny taona. Ny mpivarotra ho ahy azo antoka ny hatsaran’ny vokatra, ary mba handresy lahatra ahy ny fahaizany, dia nampiseho ihany koa ny diplaomany amin’ny informatika. Ny rindrankajy dia tsy nametraka amin’ny alalan’ny ny vokatry ny daty. Ny mpivarotra dia tsy hamaly ny antso an-tariby, ary lasa tamin izay. Ao ny andro manaraka izao aho manao ny fanadihadiana ary ny enina ambin’ny folo tamin’ny volana febroary ny taona hitako fa, amin’ny zava-misy, ny diploma amin’ny informatika dia sandoka sy ny mpivarotra efa nanao toy izany koa, mba manimba ny olona hafa, dia manolotra ny tenany ho manam-pahaizana, ny fandraisana ny vidin’ny vokatra ary tsy mba hametraka azy io. Amin’ity tranga ity, afa-tsy ny fahenina ambin’ny folo ny volana febroary ny taona, dia efa tena fahalalana ny scam, ary avy eo dia mahazo ny andro amin’ny enina ambin’ny folo tamin’ny volana febroary ny taona ho enina ambin’ny folo may (anisan’izany) mba hanao ny nametraka ny fitoriana. Koa ny amin’ity tranga ity, ny fitoriana mahakasika ny fanokafana ny heloka bevava fitsarana izay ho nanaraka ny fanadihadiana mba hahafantarana ny zava-misy niampanga. Ny mpitory dia foana ho afaka ny ho ren ‘ny Fitsarana ny Fahefana ny maha-vavolombelon’ ny zava-misy. Saina: raha izany dia eo amin’ny mahaliana ny mahafantatra ny vokatry ny fitsarana ny raharaha ny fitehirizana izany dia ilaina ny ho mazava nangataka ny filazana fitarainana, raha tsy misy fangatahana ho an’ny fitehirizana dia tsy ho nampahafantatra sy ny mety ho faty ny teny (na roa-polo andro), mba soso-kevitra ny mpanohitra. Noho izany antony izany, izany no nanolorana azy ho voafidy domicile amin’ny toerana izay naverina tamin’ny toeram-ponenana, na amin’ny lalàna mafy ny mpiaro ny efa eo ambany fanaraha-maso ny fizotry ny tantara.
Rehetra ny heloka mahavoasazy ny birao dia mety ho ny foto-kevitra ny fitarainana na fitoriana. Ny fandikan-dalàna azo tamin’ny fitoriana, toy ny teny milaza ny tenany, mba ho foto-kevitra ny heloka bevava fitsarana dia tsy maintsy ho nampahafantatra ny manam-pahefana afa-tsy amin’ny alalan’ny fitoriana ao anatin’ny fe-potoana telo volana manomboka amin ny fahalalana ny zava-misy.
Tsia, tsy tanteraka
Ny olona iray izay dia ny niharam-boina ny heloka bevava (na ny niharam-boina na simba noho ny heloka bevava) manana zo (fa tsy ny adidy) ny avy hatrany dia hanendry ny natoky ny mpisolovava. Fa afaka koa ny misafidy ny miroso amin tsy misy ny fanampiana ny mpisolovava. Na izany aza, raha toa ka, noho izany, manana fikasana ny hangataka ny Fitsarana heloka Bevava ny famerenana amin’ny laoniny na ny fanonerana ny fahavoazana, mba ho afaka hanao ny tokony ho nanangana ny maha-pirenena ny antoko, amin’ny tsy maintsy fanampiana ny mpisolovava ny fahatokiana. ‘Ny lalàna ho an’ny Rehetra’ dia ny gazety naorin’i avv
Baovao ny fahaverezana na halatra ny pasipaoro